TTSweet: ခေတ်သစ် သုံးပွင့်ဆိုင် ဇာတ်လမ်း ...
ကိုပေါ October 24, 2010 at 1:27 PM
ဟားဟား..... ကြုံရပလေတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဒါကြောင့် လည်လွန်းတဲ့ဘီးရယ်မှ မဟုတ်။ သူ့ဘာသူ ရပ်နေတဲ့ဘီးကိုလည်း ခွေးက သေးလာပန်းချင် ပန်းတာလို့ ပြောကြတာ။
ဒီအဖြစ်အပျက်ကတော့ ဖူးနုသစ် ဘလော့ဂ်ပို့စ် မှာ ရေးသလို သူငယ်ချင်းတွေက ပညာပြ(ကျီစား)လိုက်တာတော့ ဟုတ်ပုံမရဘူး။
Anonymous October 24, 2010 at 1:59 PM
အမရေ.. အဲဒါ ကိုရီးယားကားတွေ ခေတ်မစားခင်တည်းက အမရေ..
ကျနော် ဆယ်တန်းအောင်လို့ အလုပ်ခဏ၀င်လုပ်နေချိန် မျက်စိရှေ့မှာ ဖြစ်နေတာ..
ယောင်္ကျားက အိမ်ထောင်ရှိနေမှန်းသိရဲ့သားနဲ့ကို မိန်းမတွေက လိုက်ကပ်တာ..အမရာ...
ယောင်္ကျားက ရုပ်ချောလဲ စိတ်မချရ။ ငွေထောလဲ စိတ်မချရ။
အခုမိန်းကလေးတွေက သူများမှာ အိမ်ထောင်ရှိလား ဘာလားကို သိပ်ဂရုမစိုက်ကြတော့ဘူး။ ဒါကြောင့် တော်ရုံ မထိန်းနိုင်တဲ့ ယောင်္ကျားတွေနဲ့ဆို အိမ်ထောင်ကွဲ ဘာကွဲဖြစ်ကုန်ကြတာ...တခါတလေကျတော့လဲ တချို့ကိစ္စတွေမယ် ယောင်္ကျားတွေမှာ အပြစ်မရှိဘူး
ဖတ်ရတာ ရင်မောလိုက်တာ အမရယ်။
Moe Cho Thinn October 24, 2010 at 2:21 PM
ကိုမောင်ခြိမ့်အကိုက ကလေး ၄ယောက် ရှိနေမှန်း သိတာတောင် ဒီလို လိုက်လုပ်နေတာ အံ့သြစရာပဲ။ မိန်းကလေးတွေ ဒု သ န သော မကြောက်ကြတော့ဘူးလား မသိ။ ဒါမှမဟုတ် ယောကျာင်္းလေးတွေများ သိပ်ရှားကုန်လို့လားးး ဘုရား ဘုရားးး
ကလေးတယောက်ပဲ ရှိတဲ့ ကိုမောင်ရှိမ့်ဆီကိုရော ဖုန်းတွေ လာသလားဟင်.. (မဆွိကို ကလိလိုက်သည်)
mgchaint October 24, 2010 at 3:11 PM
ကျွန်တော်က ကျွန်တော်အကိုလို ရုပ်မချောဘူး။ တစ်အိမ်လုံးမှာ ရုပ်အဆိုးဆုံးကို ပြပါဆိုရင် ကျွန်တော်ပါပဲ။ ကျွန်တော့်အကိုက ငယ်ငယ်တုန်းက ဆိုရင် မြစ်တို့၏မာယာထဲက ရဲအောင်လိုမျိုးတော်တော်ချောတာ။ အသားကလဲဖြူဖြူ ဆရာဝန် ၄၄ နှစ် ဌာနမှာ အရာရှိဆိုတော့ ကပ်ကြတာနေမှာပေါ့။
စင်္ကာပူမှာ မောင်ခြိမ့်တို့က အောက်ခြေလူတန်းစားထက် အနည်းငယ်သာတဲ့ ဘ၀ ငွေမရှိတော့ ဘယ်သူမှ လာမကပ်ပါ အမရေ....
khet myint myint October 24, 2010 at 3:18 PM
ဒီစာဖတ်ရတော့ ဒီလင့်က http://freedomnewsgroup.com/2010/10/19/ အလည်လွန်တဲ့မိန်းကလေးတွေအကြောင်း သတိရသွားတယ် ။
shin October 24, 2010 at 3:28 PM
ဟုတ်ပါတယ်။ အခုခေတ်မိန်းကလေးတွေက တော်တော်ကိုမစောင့်ထိန်းကြတော့ပါ။ အိမ်ကမောင်လေးကလဲ သူ့ကိုဘယ်ကောင်မလေးက လာအီနေပြန်ပြီ။ ဘယ်ကောင်မလေးက ရီးစားစကားပြောလိုက်တယ် ဆိုပြီးကြားကြားနေရပါတယ်။
ချစ်ကြည်အေး October 24, 2010 at 3:29 PM
ကိုမောင်ခြိမ့်အကိုက ဒါမျိုးတွေ စိတ်မပါလို့သာပေါ့၊ ခက်တယ်၊ ကိုရီးယားကားမှာ ဇာတ်ကောင်တွေရဲ့ စိတ်ဓါတ် ခိုင်ကျည်မှု၊ အလုပ်ကြိုးစားမှု၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိမှု အဲလို ကောင်းတာတွေကို မယူဘဲ မကောင်းတာတွေကိုမှ ပေါ်ပင်လိုက် အတုခိုးနေတော့ ခက်တယ်။ လူ့စိတ်က မကောင်းမှုမှာ ပို မွေ့လျော်တတ်တာကိုး....
ကိုယ်တွေ့ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် SG မှာပဲ။ ကျွန်မနဲ့တူတူအိပ်တဲ့ အခန်းဖော်။ ကျွန်မမှာ ရည်းစာရှိနေတာကိုသိရဲ့နဲ့ ကျွန်မရည်းစာ အိမ်လာလည်တာ ကျွန်မရှေ့တင် ကျုနေတာ။ ချစ်နေကြောင်းသိအောင် ဖွင့်မပြောဖို့ပဲ ကျန်တော့တယ်။ ကျွန်မဆို အံတောင်သြော်ယူရတာ။ သူမကိုယ်တိုင်က မသိတာလဲ မဟုတ်။ သိသိချည်းနဲ့ကို။
AMK October 24, 2010 at 4:27 PM
ကွိုင်ပဲနော် ဘလိုင်းကြီး တိုးတာပဲ
ဂျူနို October 24, 2010 at 8:42 PM
တီဆွိရေ မအယ် အသိတွေထဲ ရှိတယ်။ သူတို့ညီအမတွေက ဆရာဝန်တွေ အရာရှိတွေ ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူဆို အဲ့လို ဖုန်းတကယ်ဆက်ပြီး ပြောကြတာ။ သမီးကလေ ဦးရဲ့နဲ့။
နောက် အမေက ခိုင်းတာတဲ့။ ချောချော လှလှလေးတွေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူတွေ။ အံ့သြမဆုံးပဲ။ အဲ့ဒါ ၁၉၉၃ လောက်က။
ဖိုးတုတ် October 25, 2010 at 1:27 AM
စီးပွားရေးအဆင်မပြေတာကြောင့် လွယ်တဲ့လမ်းကိုလိုက်ကြတယ် ထင်ပါရဲ့ ၊ ဒါပေမဲ့ တစ်ချို.ဆင်းရဲတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်များ ရိုးသားတဲ့ အလုပ်နဲ.အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတာတွေလည်းအများကြီးပါ၊ ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်စီရဲ့ အကျင့်စရိုက် အပြုအမူနဲ.သက်ဆိုင်မယ်လို.ထင်ပါတယ်
(ကျွန်တော် အခုရည်ရွယ်ရေးမဲ့ မိန်းမဆိုတဲ့ စကားလုံးတိုင်းဟာ အခုပို့စ်မှာ ပါတဲ့ အကျင့်ပျက်မိန်းမလို အတန်းအစားမျိုးကိုသာ ရည်ရွယ်ကြောင်း ကြိုတင်မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ)
သုံးပွင့်ဆိုင်ဇာတ်လမ်း လို့တော့ ကျွန်တော် မသတ်မှတ်ချင်ပါဘူး။
လူပျို အပျိုတွေ ဆိုရင်တော့ သုံးပွင့်ဆိုင်လို့ သုံးနှုန်းလို့ လှပါတယ်။ အခုဟာက သူ့ဘာသာ အေးချမ်းပျော်ရွှင်နေတဲ့ မိသားစုတစ်ခုကို (မရိုသေ့ စကားဗျာ) မနေနိုင်မထိုင်နိုင် လာနှောင့်ယှက် ဖျက်ဆီးတာပါ။
အခုလို သိသိကြီးနဲ့ မျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီး ဝင်တိုးတတ်တဲ့ မိန်းမမျိုးကို ဘယ်လိုစိတ်မျိုးနဲ့မှ ခွင့်လွှတ်ချင်စရာ အကြောင်းလုံးဝ မရှိပါဘူး။
အဲဒီလို မိန်းမမျိုးဖက်က စာနာနားလည်ပေး ခွင့်လွှတ်ပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေရှိနေခဲ့ရင် အဲလိုလူမျိုးတွေကို ခင်ဗျားတို့အဖေဆိုရင်ကော ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ ထည့်ပေးလိုက်နိုင်မှာလားလို့ ပြန်မေးလိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒီလိုမိန်းမစားတွေကြောင့် မိသားစုတစ်ခုလုံး ဂုဏ်သိက္ခာ၊ အရှက်၊ ငွေကြေး အစစ ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်။ ရစရာမရှိအောင် ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ ဒီလိုအဖြစ်တွေကို မယုံမရှိပါနဲ့။ လက်တွေ့ပါ။
ကျွန်တော့်အဖေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ မိသားစုကို ရှင်ကွဲကွဲအောင် ခွဲပြီး နည်းမျိုးစုံနဲ့ ဒုက္ခပေးခဲ့တဲ့ မိန်းမဟာ အီကိုဘွဲ့ရ ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ ဆိုင်နဲ့ ပိုက်ဆံရှိတဲ့ အပျို (စစ်မစစ်တော့ မသိ) တစ်ယောက် ဖြစ်တယ်ဆိုရင် ယုံကြပါ့မလားတောင် မသိဘူး။
အေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့ မိသားစုဘဝများအားလုံး မိန်းမယုတ်များရဲ့ အန္တရာယ်မှ ထာဝရ ကင်းလွတ်နိုင်ကြပါစေဗျာ။
(နာမည်အမှန် မရေးခဲ့တာ နားလည်ခွင့်လွှတ်စေလိုပါတယ်)
ရွှေရတုမှတ်တမ်း October 25, 2010 at 2:18 AM
ကဲ...ဗမာပြည်ကို အမြန်သွားမှပဲ...လူပျိုကြီး ရုပ်ချော သဘောကောင်း...အမေရိကန် ကိုကြီးကျောက် ရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်ကို အမြန် ဖြန့်ချီမှ...
ကိုကြီးကျောက်တို့ကတော့ သမီးလို့ပြောလဲ လက်ခံတယ်..မြေးလို့ပြောလို့လဲ လက်ခံတယ်...အဟင်း...
BA KYAUK,Do u really want to putaname in ur health insurence file?:)....Gyidaw
Unknown October 25, 2010 at 3:03 PM
အင်း...ကိုရီးယားကားနဲ့ မဆိုင်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။လူ‌တွေရဲ့ ခံယူတဲ့စိတ်ဓါတ်က ‌ပြောင်းလဲသွားတာလား ‌အောက်တန်းကျသွားတာလား?? နားလည်ရခက်ပါတယ်။အခုလတ်တ‌လော ကျမတို့ အလုပ်ထဲမှာဖြစ်‌ပျက်‌တာ ‌လေးတစ်ခု‌ပြောပြချင်ပါတယ်။‌ယောက်ကျားက အိမ်‌ထောင်သည်က‌လေး၂ ‌ယောက်နဲ့ ,သမီး‌လေးက ၁၀ တန်း‌‌တောင်‌အောင်ထားတယ်။ မရှိမရှား‌နေနိုင်တဲ့ လူတန်းစားပါပဲ။‌သူနဲ့ ညိတဲ့အမျိုးသမီးက က‌လေး ၁‌ယောက်အ‌မေ တစ်ခုလပ် ပိုက်ဆံရှိတယ်။ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့ ရုံးတက်တာ။သူတို့ ကျ‌တော့လဲ မိန်းက‌လေးက အမ်းပြီးကြိုက်ရတာ။ဒုတ်ခပဲ....ဒါမျိုးကပို‌ကြောက်ရတယ်။ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ ကိုယ် သူများလင်ကြိုကိုက်တာ ပို‌ကြောက်ဖို့ ‌ကောင်းတယ်။
အပျော်ဖတ်ဝတ္ထူ တွေ ဖတ် ကိုရီးယား ကားတွေကြည့် စိတ်ကူးယဉ်နေတာထင်တယ် နဲနဲဂေါက်နေလားမသိဘူး
လသာည October 25, 2010 at 11:46 PM
အင်း.. ဘာပြောရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ ခက်တော့လည်း ခက်တယ်၊ သူတို့ကလည်း သူတို့..။
ဒါနဲ့ ဦးမောင်ခြိမ့်ရော မဆွိပါ စာရေးကောင်းတယ်နော်။ ရေးတာလေးတွေ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းတယ်လို့ ပြောတာပါ။ ညီမတို့အိမ်တော့ ကိုယ်ကပဲ စာရေးရပြီး “အိမ်ကလူ”ကတော့ စာရေးမကောင်းဘူး။ သူရေးရင် လိုရင်းမရောက်ပဲ ခြာလည်လည်နေလို့ ရည်းစားစာတောင် တ၀က်တပျက်နဲ့ (ခြာလည်လည်ပြီး ရေးမပြီးလို့) သုံးနှစ်စောင့်ခဲ့ရတယ် အစ်မရေ :D
Rita October 26, 2010 at 12:41 PM
ကိုယ့်စာရိတ္တကို ကိုယ့်ဘာသာ တာဝန်မယူတာလို့ ထင်တာပါပဲ။ အနုပညာက လှည့်ဖျားလို့ လူတွေ စာရိတ္တပျက်ရတယ် ဆိုတာတော့ ညီမလည်း သိပ် လက်မခံဘူး။ မဖြစ်နိုင်ဘူး ပြောတာ မဟုတ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ခံစားလိုက်တဲ့ အနုပညာကြောင့် ကိုယ့်ကျင့်ဝတ်တွေ ပျက်ရတယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘာသာ တာဝန်မဲ့ရာ ရောက်တယ် ထင်ပါတယ်။
It is because of the same attribute of women
people have been admiring - maternal instinct.
Female body is driven by hormones and with the
age clock ticking, female in late 20s and early 30s long for motherhood. Perhaps, environmental
pollution, shortening expected life span inside
Burma, low quality of available Burmese men may
add up those issues. It can be partly explained
by the genes, partly by socioeconomic reasons. Women stick to their low quality husband as they
are their only means of resource providers. In
this case, perhaps that medical doctor,aloser
in some aspects, by some standards may beahe-man (gene contributor) as well asahusband (financial and physical resource provider) for
that girl. It is more to do with genes and
social condition less to do with Korean films.
dont tell about bad girls .
all of u should consider for both side coz some nice girls also got suffering coz of bad man .
for eg , some married man try to stay n sex free with the nice girl so how to do?
bad men is more than bad girls in the world.
Law Shay October 28, 2010 at 1:16 PM
တန်းတူရည်တူ အခွင့်အရေးကို ၁၂၀% လက်ခံထားတဲ့လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဘာမှ မဖြစ်ပါ။ ကောင်လေးက ကောင်မလေးကို ချစ်ရင် ချစ်ကြောင်းပြော၊ ကောင်မလေးက ငြင်းချင် ငြင်းနိုင်တာပဲလေ။ အဓမ္မမလုပ်ရင် ပြီးတာပဲ။ ပြောင်းပြန် ကောင်မလေးလဲ ကောင်လေးကို ချစ်ကြောင်း ပြောချင်ပြောနိုင်တာပဲ။ မကြိုက်ရင် ငြင်းပေါ့။ ဒါပါပဲ။
အိမ်ထောင်ရှိလို့ ရှောင်သင့်မရှောင်သင့်ကျတော့ ကျွန်တော့်ဘာသာရေး ယုံကြည်ချက်အရ မလုပ်သင့်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံရေး ယုံကြည်ချက်အရ ၂ ဦး ၂ ဘက် ကြိုက်ကြတယ်ဆိုရင် ကတ္တီပါ လမ်းခွဲပေါ့။ ကလေးရှိရင် ကလေး စိတ်ဒဏ်ရာမရအောင် ဂရုစိုက်ပေါ့။ ကလေးငဲ့လို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ငဲ့လို့ မချစ်ရဲ့သားနဲ့ လက်ရှိအိမ်ထောင်ဘက်ကို အောင့်အီးသည်းခံပြီးပေါင်း၊ ချစ်တဲ့သူနဲ့ ခိုးခိုးတွေ့ဆိုတာက မဟုတ်သေးပါဘူး။
ကဲ ... အသစ်လာကပ်တဲ့ မိန်းကလေးကို မချစ်ဘူးဆိုရင်လဲ မရဘူးကွာ။ ငါတော့ မင်းကို လုံးဝမချစ်ဘူးလို့ ပြောသင့်တယ်။ အိမ်ထောင်ရှိလို့ မဖြစ်နိုင်ပါဆိုတာက valid answer မဟုတ်ဘူး။ ငါမကြိုက်လို့ကွာ၊ ငါ့မိန်းမပဲ ငါချစ်လို့ကွာဆိုတာကမှ valid answer.
mgchaint October 28, 2010 at 2:06 PM
ဟုတ်ကဲ ကိုလောရှည် ခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်အကိုကလဲ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ စိတ်မရှိတဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ဆိုရင် ပြောလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်အကိုအနေနဲ့ အဲဒီ မိန်းခလေးရဲ့ နှောယှက်မှုကို အောင်မြင်စွာ ကျော်လွှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့ အဖြစ်အပျက်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်က အမှန်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အဲဒီမိန်းခလေးရဲ့ မိဘများကိုလဲ ကျွန်တော်အကိုက လူကြီးလုကောင်းပီပီ သွားရောက်ပြောကြားလိုက်လို့ အဲဒီမိန်းခလေး ထပ်ပြီး မနှောက်ယှက်တော့ပါဘူး။ ကားဂိတ်မှာ ထိုမိန်းခလေးက ကျွန်တော်အကို ခရီးထွက်တာကို စုံစမ်းသိရှိပြီး လက်မှတ်ဝယ်တာပါ။ ကျွန်တော်အကိုက ခိုးတွေ့ခြင်းလဲ မဟုတ်သလို ထိုမိန်းခလေးကို အဲဒီအချိန်ကျမှ သူမကနေ နာမည်ပြောပြီး မိတ်ဆက်လို့ ပထမဆုံး မြင်ဖူးလိုက်တာပါ။ ဒါအပြင် ကျွန်တော်အကိုရဲ့ အိမ်ထောင်ရေးက ယခင်ကအတိုင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဆက်လက် တည်မြဲလျက်ရှိပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ ကြုံလို့ ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ ဒီပို့စ်လေးက မြန်မာပြည်က လက်၇ှိကာလမှာ ရှိတဲ့ မိန်းခလေးတွေရဲ့ အတွေးကို ပြန်လည်ဖော်ပြတာပါ။ လောကမှာ တခါတလေ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တာကို ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားကို အသက်အရွယ်ရရင် နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်တော်ရေးရတဲ့ ရည်၇ွယ်ချက်က ခေတ်စနစ်ရဲ့ ပျက်ယွင်းမှုကြောင့် နိုင်ငံအတွင်းမှာ ရှိတဲ့ လူငယ်တွေ အနေနဲ့ စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ အကျင့်သိက္ခာပိုင်းဆိုင်ရာ များ အားနည်းလာလို့ အားလုံးအနေနဲ့ ၀ိုင်းဝန်းပြင်ဆင်သင့်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးရေးခဲ့တာပါ။ မကောင်းမွန်တဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေ ပျက်စီးယိုးယွင်းနေတာတွေ များလာရင် တိုင်းပြည်အနေနဲ့ ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့ ခေါင်းဆောင်း အုပ်ချုပ်သည်ဆိုသော်လည်း ဘယ်သောအခါမှ ကောင်းမွန်တဲ့ အောင်မြင်တဲ့ နိုင်ငံတနိုင်ငံဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ကျွန်တော်အမြင်ကို သင်ပြတာပါ။
အမျိုးသား အမျိုးသမီး အခွင့်အရေးကို ခွဲခြားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံမှ ကျင်ဝတ်သိက္ခာပျက်ယွင်းတဲ့ သူများ ကိုလက်မခံပါဘူး။ ဒီသဘောတရားကို တင်ပြခြင်းပါ။ ရေးချင်တာတွေတော့ အများကြီးပါ။ ကွန်မန့်ဖြစ်လို့ ဒီလောက်နဲ့ပဲ ကျွန်တော်ရပ်လိုက်ပါတယ်။
Please u should write the nature of the married man in SG.
Mostly are myanmar married man try to sex with the nice single girl anyway u have to write that kind of Story .
Unknown October 28, 2010 at 6:42 PM
အိမ်‌ထောင်သည်‌ယောက်ကျားများကအိမ်‌ထောင်မရှိသူမိန်းမ‌ကောာင်း‌လေး ကိုကြံစည်တဲ့အ‌ကြောင်းအရာကိုရည်ညွန်းပါလားလို့ သူက‌ပြောထားပါတယ်။
မြန်မာအထီးမှမဟုတ်ဘူး အထီးဆို ဘယ်အထီးမှ ၁‌ယောက်ထဲနဲ့ မတင်းတိမ်ကြဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား။အဲ့‌နေရာမှာ ‌စောင့်ထိန်းတဲ့သူနဲ့ ‌ဖောက်ပြန်တဲ့သူ၂မျိုးပဲရှိမယ်။သူ‌ပြောတဲ့အိမ်‌ထောင်မရှိသူမိန်းမ‌ကောာင်း‌လေးက အဲ့လိုလူကို လက်ခြံပီး ‌နေကြမယ်ဆိုရင်‌တော့ အများအ‌ခေါ်အ‌မြှောင်.စ‌မော.‌ပေါ့။ ဘယ်မိန်းးမ‌ကောင်းကမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သူများအငယ်အ‌နှောင်းအဖြစ်မခံဘူး။ ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ အဲဒါ မိန်းမ‌ကောင်းမဟုတ်လို့ ပဲ။
လက်ခုပ်ဆိုတာနှစ်ဘက်တီးမြှမည်ကြတာပါ။‌ယောက်ကျားဆိုတာမျိုးက‌တော့ ဘယ်ဟာမဆို ရမလား ဆြိုပီး စမ်းကြမှာပဲ။အာ‌ချောင် ပါးစပ်‌ဆော့ ရာက‌နေ အ‌နေအထိုင်မတတ်လို့ က‌တော့ တိတ်တိတ်ပုန်း‌တွေဖြစ်ကုန်မှာပဲ။
So u can remomend ur self ?
A woman's dream is to get the good genes
fromatall, handsome and intelligent man
and to haveaman near by to help raise
the kids fathered by the same man or the
other man. If all things equal, no woman
likes short, unattractive and boring man,
but sometimes they settle for someone if
they are not sure that the other guy may
just breed her and left her for herself.
The life of famous "Lars von trier" who
directed the film, "The Anti Christ" is
such an example, his mother had affair
with an musician (not guitar playing bum
but violin or piano playing musician)
whose lineage went back to the times of
Roman empire. She wanted good genes in
her and so she cheated so that her son
can get good genes, that director learn
his own father only when her mother was
in her death bed. No wonder he isavery
Another story is with overseas Chinese.
Almost all overseas Chinese came from
(then) poor Fujian province, were all
those Hokkien, Hakka, etc.. So they all
were initially illiterate peasants and
coolies. Perhaps that is one of many
reasons, Singapore have good scientists
and engineers but not ground breaking
exceptional talent. That is why they
are importing foreign talent.
So your brother beingadoctor, have
above average intelligence (by Burmese
standards) and intellectual capacity
(reading books, to add wisdom to the
raw intelligence) and that genes might
have attracted that girl to that chap.
မိန်းကလေး အရှက်မဲ့တာ သူတစ်ပါး မိသားစုအပေါ် စာနာစိတ် မရှိတာပါ။ သူ့ကို မသိမရင်းနှီးတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို ဒီလို ကြံတာဟာ တစ်ဖက်လူကလဲ သူ့ကို လေးစားမှာ မဟုတ်ဘူး၊ ကိုမောင်ခြိမ့်အစ်ကိုလို ကိုယ်ကျင့်တရား အားကောင်းသူမျိုး မဟုတ်ဘဲ အငိုက်မိလွယ်တဲ့ အခြားသူတစ်ယောက်ဆိုရင်လဲ ဒီလို မိန်းမမျိုးကို ခဏအပျော်ခံအဖြစ်ထက် တန်ဖိုးထားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကာမကို ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ လဲချင်လို့ လိုက်နေမှန်း ရိပ်မိမှာပဲ။
တစ်ဖက်အိမ်ထောင်က ဇနီးသည်ကို မိန်းမသားချင်း ကိုယ်ချင်းမစာဘူးထားဗျာ၊ သားသမီးတွေ ဘယ်လို ခံစားရမယ်ဆိုတာ နားလည်ပေးသင့်တယ်။ ဖခင်တစ်ယောက်ဆိုတာ အိမ်ထောင်မှာ ပျောက်ဆုံးသွားလို့ ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမှ မဟုတ်တာ။
Anonymous November 18, 2010 at 2:13 PM
မိန်းကလေးတွေထဲက တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေဖောက်ပြန်တာ..ကိုယ့်ကိုကိုယ်အထင်ကြီးပြီး ငါဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးမာန်မာနနဲ့ ထင်ရာလျှောက်လုပ်တတ်ကြတာ လုံးဝလက်ခံတယ်..
ကိုယ့်မိဘကိုယ်တိုင်လည်း အဲလိုအဖြစ်ခံခဲ့ရလို့ မိဘမဲ့ ဘ၀နေခဲ့ရတယ်..အဲလိုလူမျိူးတွေကို ပြောချင်ပါတယ် ကိုယ်ပြုသောကံအတိုင်းခံစားစံစားရမယ်နောင်ဘ၀မဟုတ်ဘူး..အခုဘ၀မကြာခင်ကာလတင်ပါလို့..သူတို့တွေမှာ အရှက်တရား..လုပ်သင့်မလုပ်သင့်အတွေးအခေါ်လုံးဝမရှိပါဘူး.. ဥာဏ်ရည်အရမ်းနိမ့်ပါးတဲ့ တိရစာန်သာသာလူတစ်ချို့ပါ..လုံးဝရှောင်ကြဉ်ပါ..သူ့ရဲ့ အကုသိုလ်ဝဋ်
ဆင်းရဲထဲ ကိုယ်ပါကူညီသူမဖြစ်စေချင်ကြပါဘူး..မိသားစုတစ်ခုရဲ့ မျက်ရည်စက်ပေါင်းများစွာ..နာကြည်းမှု့ပေါင်းများစွာ..စိတ်အင်အားချို့တဲ့မှူ့ပေါင်းများစွာ သူမပြန်ခံစားရမှာပါ..အဲလိုလူမျိူးတွေကလည်း လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ပြီးရင် နောက်တစ်ယောက်ကိုခုန်အုန်းမှာပါ..မျောက်အုန်းသီးရသလို..တစ်လောကလုံးရှိတဲ့ယောကျာင်္း ငါပိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ လိုက်ပစ်မှတ်ထားနေအုန်းမှာပါ..အဲလိုလူမျိူးတွေရှိတာ လွန်ခဲ့တဲ့ အနှစ်၃၀လောက်ကတည်းကပါ..အဲဒီအချိန်မှာတော့အရမ်းရှားတာပေါ့နော်..အခုတော့ အဲလိုမ်ိန်းမတွေအရမ်းပေါနေပါပြီ.. မိန်းမတိုင်းကိုပြောတာမဟုတ်ပါ..ကိုယ်လည်းမိန်းမထဲကမိန်းမတစ်ယောက်ပါ..